သတင်းဆောင်းပါး | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 89
ကျမ်းသစ္စာဆိုကြရာဝယ် တူမောင်ညို ။ ဧပြီလ ၁၂၊ ၂၀၁၂ ၂၄ မတ်၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် “— ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တတိယအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ခေတ္တ ရပ်နားမည်၊ အရေးတကြီးဆုံးဖြတ်ရန်ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အတွက် ယခု ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် တတိယအကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ဧပြီလ(၂၃)ရက်တွင် ခေါ်ယူရန်ရှိကြောင်းနှင့် ခေါ်ယူရန်မလိုသည့် အခြေအနေဖြစ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်များထံ အချိန်မီ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း— ” ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ လွှတ်တော်ရုံးညွန်ကြားရေးမှူးက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ (၄၃) နေရာရွေးချယ်ခံရတဲ့ (NLD) ပါတီ တာဝန်ရှိသူများထံ လွှတ်တော်တက်ရန်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ၂၃ ဧပြီ မှာ လွှတ်တော်ကျင်းပဖို့ သေချာနေပါပြီ။ (NLD) ပါတီကလည်း သူ့တို့ရဲ့ရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ဧပြီလ ၁၉ – ၂၀ ရက်များမှာ...
Maung Thar Man – မြန်မာအစိုးရသစ်နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အားစမ်းမှု၊ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲပြီးဆုံးခြင်း
မောင်သာမန်၊ ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၂ Aung San Suu Kyi and NLD Head Quarter at bi-election win night view (01-Apr-2012) နိဒါန်း မြန်မာပြည်မှာ ၁၉၆၂ ကတည်းက စစ်အာဏာရှင်များအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ လပ်စားမှု၊ များကြောင့် ၁၉၈၈ (ရှစ်လေးလုံးအရေးခင်း)၊ ၂၀၀၇ (သံယာအရေးအခင်း) များကို စစ်အစိုးရမှ ပြင်ထန်၊ရက်စက်စွာ ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်း နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် လူ၂သိန်းခန့် သေဆုံးခဲ့ရာတွင်လည်း စစ်အစိုးရက ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအား လစ်လျူခဲ့သည်။ သို့သော် နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို စတင်သည့်အနေဖြင့် ၂၀၁၀တွင် ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးခဲ့သည်။ အတိုက်အခံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ခေါင်းဆောင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နှစ်၂၀ခန့်...
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁ ရက်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးချယ်ခံရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအမည်စာရင်း အပြည့်အစုံ (စုစည်းသူ- တူမောင်ညို) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၄ ရက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် မှ အောက်ပါ ကြေညာချက် ၅ ခုဖြင့်ထုတ်ပြန် ကြေညာသော ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁ ရက်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးချယ်ခံရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအမည်စာရင်း အပြည့်အစုံမှာ – – ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂ ရက်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၇/၂၀၁၂) ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း (မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ၃ ဧပြီ ၂၀၁၂) – ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂ ရက်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊...
၂၀၀၈ဘောင်ထဲက ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုရင်တော့… မောင်ခင်အေးတင့်(မဒေါက်)၊ မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၂ ၁၉၆၂ခုနှစ် မတ်လ(၂)ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်၁၇-ဦးပါ တော်လှန်ရေးကောင်စီက စစ် အာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်။ မတ်လ(၉)ရက်နေ့မှာတော့ အချုပ်အခြာအာဏာသုံးရပ်စလုံး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း လက်ထဲ ရောက်သွားပြီး အဲဒီ မတ်လ ၂-ရက်နေ့ကိုလည်း တောင်သူလယ်သမားနေ့အဖြစ် Tags: ကချင်, ပြည်တွင်းစစ် Related posts နိုင်ငံမအုပ်ချုပ်သော ဗီယက်နမ်စစ်ဗိုလ်ချုပ် ကွယ်လွန် (0) ဖြိုးသီဟချို/Myanmar Now – လီဆူတိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး အိမ်မက် (0) ဖြိုးသီဟချို/Myanmar Now – ဒုက္ခသည်တို့ကို ကူညီအားပေးနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း (0) ငြိမ်းဝေ – သေနတ်သံတွေ တိတ်သွားတဲ့ အထိ ကဗျာတွေ...
မြန်မာ – ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့် အကြားအငြင်းပွားခဲ့တဲ့ ပင်လယ်ပြင်နယ်နိမိတ်ပိုင်ဆိုင်မှု တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ရှင်းလင်းချက်
ငြိမ်းချမ်းအေး မတ်လ ၁၅၊ ၂၀၁၂ မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်အကြား အငြင်းပွားခဲ့တဲ့ ပင်လယ်ပြင်နယ်နိမိတ် ပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာအပေါ် ပင်လယ်ပြင်ဥပဒေဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံတကာ တရားရုံး (ITLOS) က ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး (ကျနော်တို့လို လူပြိန်းတွေအတွက်) အထိုက်အလျောက် နားလည်နိုင် ဖို့က အသုံးအနှုန်း၊ အခေါ်အဝေါ်တွေရဲ့အနက်ကို အရင်သိမှဖြစ်ပါမယ်။ ● Internal Water (ကုန်တွင်း ရေပိုင်နက်/ကမ်းရိုးတန်းအတွင်း) ကုန်တွင်းရေပိုင်နက် သတ်မှတ်ရာမှာ ရေမိုင်အတိအကျမရှိ (ဟု ယူဆရ)။ အခြေခံမျဉ်း (Baseline) မှ ကုန်တွင်းဘက်ခြမ်း ဧရိယာအားလုံးပါ။ အခြေခံမျဉ်း (Baseline) ရဲ့အကွာအဝေးကို သတ်မှတ်ရာမှာ ရေတိမ်မျဉ်း (Low-Water Line) အပေါ်မူတည်။ ဒါကြောင့် ရေတိမ်မျဉ်းမှစပြီး ကုန်းတွင်း ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်းဧရိယာအားလုံးကို ကုန်တွင်းရေပိုင်နက်ဟုခေါ်။ ကုန်တွင်းရေပိုင်နက်အတွင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာကမ်းရိုးတန်း...
Amnesty Prison Art Show 2012 – လွတ်လပ်ငြိ်မ်းချမ်းခွင့်၊ နံရံကြားမှ အနုပညာ ပန်းချီပြပွဲ မြင်ကွင်း အဆက်
တာရာဝေယံ၊ ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၁၊ ၂၀၁၂ ထွန်းဝင်းငြိမ်း။ ဦးကျော်ညွန့်၊ ဦးသက်ညွှန့် လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းခွင့် (Amnesty) လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ (Prison Art Show 2012)နံရံကြားမှ အနုပညာ ပန်းချီပြပွဲ ဖွင့်ပွဲကို မတ် ၉ ၊ မနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ အထက်ဘလောက် အမှတ် ၂၂၅၊ ၂၂၇ မှာ ရှိတဲ့ စာပေလောကမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ရေးခဲ့တဲ့ ပန်းချီကားတွေကို အကျဉ်းထောင်ခံစားမှုတွေကို တင်ပြထားတဲ့ ပန်းချီလက်ရာတွေ ပြသထားတဲ့ ဒီပန်းချီပြပွဲကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေက စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။ ဦးမိုးသူ။ ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ဒေါ်ငယ်မမသန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာ ၅၈ခုနှစ် တကသကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးမိုးသူ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့...
Zawaree – လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင်ဖို့
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ဇာဝါရီ။ မတ် ၇၊ ၂၀၁၂ အနောက်နိုင်ငံများမှာ April Fool ဧပြီအရူးနေ့လို့ လူသိများတဲ့ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လစ်လပ်နေတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာများအတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ ရက်သတ္တပတ် (၃) ပတ်လောက်ပဲ အချိန်ရှိတော့တယ်။ အများပြည်သူများကတော့ ဒီတခေါက် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ မဲဆန္ဒနေရာအားလုံးကို အနိုင်ရမယ့်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အနိုင်ရယူသွားခဲ့တဲ့ ပြည်သူမထောက်ခံ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်များအတွက်တော့ ဒီတကြိမ် အခြေအနေ မကောင်းလှဘူးပေါ့။ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ ဟစ်ကြွေးနေတဲ့ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရခေါင်းဆောင်များလည်း သူတို့ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များ မဲရရှိရေးကို ဘယ်လို ကြံစည်နေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ အများက...
လူထုစိန်ဝင်း မတ် ၅၊ ၂၀၁၂ စာပေစိစစ်ရေးက အပုဒ်လိုက် ဖြတ်တောက် မီဒီယာဥပဒေဆိုင်ရာ ဆောင်းပါး “—မီဒီယာကို ချုပ်ကိုင်ဖို့ ရေးဆွဲတဲ့ ဥပေဒကို မီဒီယာသမားတွေကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆွေးနွေးအကြံပေးကြတယ် ဆိုတော့ တော်တော်အံ့သြမိတယ်။ သတင်းမီဒီယာသမားစစ်စစ်တွေမှ ဟုတ်ရဲ့လား လို့လည်း အတွေးရောက်မိတယ်။ ကိုယ့်လည်ပင်းကို စွပ်မယ့် ကြိုးကွင်းကို ကိုယ်တိုင် ၀င်ကျစ်ပေးတာနဲ့ မတူဘူးလား—“ No tags for this post. Related posts No related posts.
KIC Newsletter – ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ရာ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ၀ါးသင်္ခကျေးရွာ
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ရာ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ၀ါးသင်္ခကျေးရွာ from Karen Newsletter / အယ်ဂလယ်မူး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ကြား ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင် ပိုင်းခရိုင်၊ ကော့မှူးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်၏ အဓိကယှဉ်ပြိုင်ဘက် ဖြစ်လာမည့်သူမှာ ပြည်ထောင် စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာစိုးမင်း ဖြစ်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကော့မှူးမြို့နယ်သို့ အိမ်ထောင်စုဇယား(ပုံစံ-၁၀) ပြောင်းရွှေ့ရသည်။ ကော့မှူးမြို့နယ်မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မီဒီယာများအား ပြောကြားချက်အ ချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ “ကော့မှူးက ပြိုင်မယ်ဆိုတော့ အဲဒီမှာပဲ...
အေးရှတိုင်းမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်ထား တာဖြစ် ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ အရင်အစိုးရတို့ရဲ့ အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းတွေ အပေါ်မှာ နိုင်ငံတကာက ဝေဖန်ပြစ်တင်တာတွေ ရပ်တန့်သွားပြီး ခုချိန်မှာ မြန်မာအစိုးရအတွက် နိုင်ငံတကာ မိတ်ဆွေတွေ တိုးပွားနေပါတယ်။ အမေရိကန် အစိုးရနဲ့ ဥရောပ သမဂ္ဂ အတွင်းက ရန်သူဟောင်းတွေကလည်း အခု အခါ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုပ်သိမ်းသူက ရုပ်သိမ်းကြ သလို၊ တချို့ကလည်း ရုပ်သိမ်းဖို့ ပြင်နေကြပြီ။ နိုင်ငံပေါင်းစုံ ဖြန့်ကျက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကလည်း အာရှမှာ နောက်ဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံရာ မြန်မာစားကျက်မြေကြီးထဲကို ခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်ဖို့ရာ ခြေလှမ်းတပြင်ပြင်ဖြစ်နေပြီ။ သမ္မတ သိန်းစိန်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ...
Page 89 of 90«1...8687888990»
Join 93,997 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month June 2018 (148) May 2018 (199) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ကာတွန်းကိုတေရဲ့ အခွင့်အရေးလေးပဲ ပေးပါ …. https://t.co/NpNT2jM9GN https://t.co/XhH2d0q2Ds about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
ကျော်​ထင်​ ● ကြိုးစားမှု ဘိန်း​ကျွေးခြင်း https://t.co/f9ioAKIEnn https://t.co/kbyQx7LMIJ about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ATH ရဲ့ စိုက်ကြပြန်ပြီ … https://t.co/GznGEXVq9E https://t.co/rwlN10uJ3c about 22 hours ago ReplyRetweetFavorite
ဇင်လင်း ● မစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ (သို့မဟုတ်) အငြင်းပွားဖွယ် တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြဿနာ… https://t.co/cpitDHmpPE about 22 hours ago ReplyRetweetFavorite
နေချိုသွေး ● ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး https://t.co/Qpakx9rY4W about 23 hours ago ReplyRetweetFavorite